LEGO Super Mario 71381 Chain Chomp Jungle Encounter ကိုပထမဆုံးကြည့်ပါ
22 / 12 / 2020 23 / 12 / 2020 အာဒံ Basch 787 Views စာ0မှတ်ချက် 71381 Chain Chomp တောတွင်းကြုံတွေ့တိုးချဲ့သတ်မှတ်မည်, Lego, Lego စူပါမာရီယို
အစောပိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်a၏ဆိုက်ရောက် classic ရန်သူ Lego စူပါမာရီယို 71381 Chain Chomp တောတွင်းတှေ့ဆုံ.
အခြားလာမည့်တိုးချဲ့မှုအထုပ်များကဲ့သို့ 71382 Piranha Plant ပဟေlingိစိန်ခေါ်မှု နှင့် 71383 Wiggler ရဲ့အဆိပ်ရွှံ့ညွန်, ဒီအစုံဟာ Soda Jungle တွင်ဖြစ်ပျက်။ ဒီရွှံ့ညွံကမ္ဘာ၏အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောရေများသည်မာရီယိုအတွက်သေစေနိုင်သောအရာဖြစ်ပြီးခရမ်းရောင်ဇီဝရုပ်သစ်တစ်ခုဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်။ ယခင်ထုတ်လွှတ်ခဲ့သည့်အနီရောင် 'ချော်ရည်' ပြားများနှင့်ဆင်တူသည်၊ သူသည်ခရမ်းရောင်အောက်ခံပြားများပေါ်ကျပါကစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
တိုးချဲ့မှုအစုသည်မာရီယိုနှင့်အတူဖြေရှင်းရန်ရန်သူနှစ် ဦး ထပ်တိုးသည်။ Bramball သည်စပျစ်နွယ်ပင်သစ်နှစ်မျိုး၏ထောက်ခံမှုဖြင့်လေထဲတွင်ဆွဲထားသည်။ ဤရွေ့ကားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အပိုငျးပိုငျး Bramball ကိုင်ထားပေမယ့်လည်းမာရီယိုသူ့ကို pummels အဖြစ်လက်တွေ့ကျသောရွေ့လျားမှုအတွက်ခွင့်ပြုပါ။
ဤအစု၏တကယ့်မီးမောင်းထိုးပြမှုမှာ Chain Chomp တစ်ခု၏ကမ္ဘာကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်သည် Lego စူပါမာရီယို။ ဒီအထင်ကရရန်သူဟာ ၁၉၈၀ နှောင်းပိုင်းကတည်းကမာရီယိုကိုဝမ်းနည်းပူဆွေးနေစေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအုတ်တံတိုင်းဖြစ်ဖို့ကြာခဲ့ပြီ။
youtube ချစ်တယ် ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အစုံ၏အစောပိုင်းမိတ္တူကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သူ၏ဗွီဒီယိုတွင် Chain Chomp သည်သူ၏ပုံမှန်အတိုင်းချွတ်ယွင်းစေသောထူးခြားသည့်ကစားနည်းကိုဖော်ပြသည်။ မာရီယိုသည်သစ်သားသစ်ပင်ပေါ်သို့ခုန်ချလိုက်သောအခါ Chain Chomp ပျံသန်းသည့် send-saw ယန္တရားကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
71381 Chain Chomp တောတွင်းတှေ့ဆုံ £ 1 / $ 19.99 / € 19.99 အတွက်ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှာစတင်ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအခြားတစ်သီချင်းအတူရောက်ရှိပါလိမ့်မယ် Lego စူပါမာရီယို အပါအဝင်အစုံ 71380 သင်၏စွန့်စားမှုပြုလုပ်သူ Set ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါ, နောက်ထပ်နှစ်ခုတိုးချဲ့အထုပ်, အသစ်ကပါဝါ -Up packs ကိုနှင့် ဇာတ်ကောင်အထုပ်၏ဒုတိယစီးရီး.
← LEGO.com တွင်ယူကေသို့ပုံမှန်တင်ပို့မှု
LEGO Super Mario 71383 Wiggler's Poison Swamp ကိုပထမဆုံးကြည့်ပါ →